तस्वीर : सन्तोष बानिया
हेटौंडा-काठमाडौं छाेटाे दुरीकाे मार्गअन्तर्गत इन्द्रसरोबर गाउँपालिका वडा नम्बर २ लामबगरमा आज दिउँसो ३ बजे टाटासुमो दुर्घटना भएको छ । बीरगञ्जका लागि काठमाण्डौँबाट छुटेको ना १ ज ४५११ नम्बरको सुमो खानखेत-सिस्नेरी खण्डमा सडकबाट भीरमा खसेर दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा चालकसहित १० जना घाइते भएका छन् । सुमोमा चालकसहित १० जना रहेको र सबै घाइते भएको खानीखेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घाइतेमध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ ।
तीव्र गतिका कारण सवारी दुर्घटना भएको सुमोमा सवार घाइते यात्रुहरुले बताएको स्थानीय सञ्चारकर्मी सन्तोष बानियाले थाहाटाइम्सलाई जानकारी दिए । सुमो सडकबाट झण्डै ४० मिटर तल खसेको छ ।
अहिले घाइतेहरुको उद्धार गरी उपचारको लागि पठाइँदै गरेको खानीखेत प्रहरी चौकीका असइ आर. सि. शाहले जानकारी दिए । घाइतेहरुलाई एम्बुलेन्स, प्रहरीको गाडी र जिपमा राखेर अस्पताल पठाइएको छ । घाइतेहरुको विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।